Atụmatụ 3D Foto - Otu esi agbapụ foto kacha mma 3D - LucidPix
Atụmatụ 3D Foto - Otu esi agbapụ foto kacha mma 3D
3D Photography Atụmatụ
Etu esi gbanye Foto kacha mma 3D
Tupu ị gawa ma mepụta nke gị, nke a bụ ndụmọdụ 3D foto ole na ole ga - enyere gị aka ịme foto kacha mma 3D.
Gaa na ngalaba: Biarue nso • Edochila ihe ndị AI • Movable foto • Zere Mgbanwe Ọnọdụ Mgbanwe • Họrọ Isiokwu • Gbaa Ọzọ • Gbalịa Ntọala Sharingkekọrịta Dị Iche • Tinye iyo • Jiri Anya • Nwalee Ihe Ọhụrụ • Tinye ederede 3D • Budata LucidPix
Ndụmọdụ ndị a metụtara foto 3D ọ bụla
(Anyị na-eji okooko osisi na-akọ akụkọ ahụ n'ihi na, nke ọma, gịnị kpatara ya?)
Ndụmọdụ # 1: Bịaruo Nso Nsogbu
Dịka e gosiri na vidiyo dị n’elu, emere ya na LucidPix, ị nwere ike ịhụ nso nso a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị macro nwere ike ibute nnukwu foto 3D. Foto ndị a agbachiri agbachi, nwere ike ịgbakwunye na ahụmịhe nkiri.
Iji nweta nsonaazụ kacha mma dị mma, ịnwere ike ịnwale iji ekwentị gị ekwentị mode eserese, nke kwesịrị inye aka mee ka a mata ihe dị n’azụ ka ị na-elekwasị isiokwu ahụ anya nke ọma.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iwepụta DSLR gị site na iji ngwa ngwa na oghere dị ukwuu iji mepụta obi dị mma n'ụzọ nkịtị. Bokeh a siri ike, ma ọ bụ na-agbapụ n'azụ, ga-ekwe ka isiokwu foto na-agagharị na-enweghị onwe ya maka ndabere ahụ, na-emezi mmetụta 3D.
Ndụmọdụ # 2: Ekwela Ka Atọ 3D XNUMXD AI
Dika anyi n’acho ikwu na anyi ezughi oke, anyi adighi
Mgbe ụfọdụ ọgụgụ isi ọgụgụ isi dị n'ime ngwa ntụgharị 3D anaghị aghọtacha ihe ọ na-ele. Na vidiyo dị n'elu, ị ga-ahụ na anther na-esogharị ifuru ahụ na nsọtụ stamen ahụ. AI amaghi na ha ejikọrọ, na-eme ka nkọ ahụ dị nkọ ị hụrụ na vidiyo 3D dị n'elu.
Enwere ike ihu nsonaazụ ndị yiri nke a mgbe ị na-agbanwe foto na ọtụtụ ahịrị dị larịị, dịka nkwado na akwa, obere osisi nke ifuru, alaka osisi na-enweghị osisi, ma ọ bụ nchara.
Anyị na-arụsi ọrụ ike na-emeziwanye mpaghara ndị a, nọrọ na nche maka ozi ndị ọzọ gbasara nkwalite ntụgharị LucidPix 3D na-abịanụ.
Ndụmọdụ # 3: Foto Mounding Ihe
Omimi nwayọ nwayọ na-agbanwezi maka ifuru ma ọ bụ ihe ndị ọzọ yiri anya na -emepụta mkparịta ụka foto 3D. (Site na “ịdị omimi”) anyị pụtara na akụkụ dị iche iche nke ebe ahụ si igwefoto.) Mgbanwe ndị a dị mma na anya pụrụ ime ka ihe ngosi 3D dị mma karị. Ọ na - enyere aka na ụdị ihe ngosi a achọghị ngwa ahụ iji chee echiche nke ọma banyere ihe na - akpata ihe.
Osisi Mounding Nwere Nnukwu Ubi na 3D
Coleus dị na vidiyo a tụgharịrị nke ọma na 3D, na-enye gị ohere inwe mmetụta dị ka ị na-eji anya nke gị. mgbanwe nke nwayọ nwayọ nwayọ site na isiokwu nke foto gaa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị anya na okirikiri na-eme ka mmetụta 3D kawanye ike.
Ndụmọdụ # 4: Ejidela Mgbanwe Na mberede na 3D Omimi
Mgbanwe mberede na omimi na-ebutekarị foto 3D na-adịghị mma. (Cheta, “ịdị omimi”) dị anya akụkụ dị iche iche nke ebe ahụ si igwefoto.) Nke a bụ mmetụta dị n'akụkụ nke otu esi egosipụta ịdị omimi 3D na Foto 3D XNUMXD ma ọ bụ ngwa foto 3D dị ka LucidPix.
Mgbe ị na-elele foto 3D, ihe dị na mbido ihu na-akwagharịkarị ihe na-akụ n'okirikiri. Maka nke a, obere mgbanwe dị omimi n'etiti isiokwu nke foto na ndabere na-emekarị maka foto 3D kacha mma.
Ọ bụghị ruo mgbe mgbanwe ndị a ghọrọ nnukwu na nsogbu na-amalite ịpụta. Mgbe ụfọdụ mmetụta 3D na-ebelata mgbe mmemme ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi ga-eche ma see ihe dị n'azụ ihe ndị dị na mbido.
Gbalịa Makemela Ka AI Lelee Ihe Na-akpata Nsogbu
Mgbe sistemu nke na-ekpebi omimi na foto “ịkọ nkọ” ihe ga-eme ihe dị na foto ahụ, mgbe ụfọdụ ọ na-efu. Na vidiyo dị n'elu, ị nwere ike ịhụ na AI emeghị nnukwu ọrụ na-eche ihe ifuru Zinnia zoro. Izere mgbanwe miri emi na-agbanweghi ike, belata nsogbu ndị a.
Anyị na-arụsi ọrụ ike na-emezi atụmatụ ndị a, nọrọ na nche maka ozi ndị ọzọ gbasara nkwalite ntụgharị LucidPix 3D na-abịanụ.
Ndụmọdụ # 5: Họrọ Isiokwu Maka Foto Gị
Nke a bụ nnukwu foto foto 3D: Foto na-adịkarị mma mgbe enwere isiokwu doro anya maka anya gị ga-adọrọ. Ndị na-ese foto na-ahapụ obere nkọwa. Kama nke ahụ, ha na-eme ka onye na-ekiri ha hụ ihe onye na-ese foto chọrọ ka ha hụ site n'iji nlezianya dozie isiokwu ahụ.
Were, dịka ọmụmaatụ, vidiyo 3D dị n'okpuru. N'ebe a, enweghi isi okwu doro anya. Ihe ị na - ahụ bụ nnukwu osisi Coneflower. You maghị ebe ị ga-etinye anya gị, na-ahapụ gị ịchọrọ karịa na foto ahụ.
Gbalịa ịhọrọ Isiokwu
Ndụmọdụ # 6: Maka otu oge, agbanyela foto gị n’elu
N’adịghị ka ọtụtụ vidiyo, a na-eme foto 3D ka ọ masịrị gị ama gị. Nke a bụ ndụmọdụ foto 3D; belụsọ na ịnwere ezigbo ihe kpatara na ịgaghị, ị kwesịrị ị na-agbapụ foto gị mgbe niile, ma ọ bụ ụdị eserese, kama ịmegharị / ihu ala. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike jupụta na ihuenyo ekwentị gị na foto 3D ị mere.
Gbaa Ọgbọ Vertical
Ndụmọdụ # 7: Gbalịa Ntọala ringkekọrịta Dị Iche Na LucidPix
N'ime ndụmọdụ 3D a niile, nke a nwere ike bụrụ ihe kacha mkpa. Ugbu a ị mepụtara foto 3D zuru oke, oge eruola ịkọrọ ya ndị enyi na ezinụlọ gị. Thezọ kachasị mma iji kesaa ya bụ n’ime LucidPix, nke na-eme ka ndị na-ele gị hụ ihe kacha mma, foto 3D kacha mekọrịta. Facebook nwekwara nnukwu foto nkekọrịta 3D nke ahụ ga - egosipụta foto 3D emere na LucidPix.
Ringkesa ihe okike 3D n’èzí nke LucidPix na Facebook choro ka ị bupụ dị ka ihe na-emegharị anya GIF or MP4 vidiyo. Filedị faịlụ ọ bụla ga-emepụta obere vidiyo na-egosipụta foto 3D ị mere. LucidPix na-enye mmegharị igwefoto 4 ugbu a ị nwere ike ịhọrọ mgbe ị na-ebupụ: Orbit, Zoom, Slide, and Square.
Mbido mbupụ: Orbit
Ọnọdụ mbupụ Orbit
Ọnọdụ Orbit na-emegharị igwefoto gburugburu na gburugburu, na-egosipụta akụkụ niile nke ifuru 3D gị. Nke a na - abụkarị nnukwu nhọrọ, maka na ọ na - egosi etu anyị si agbanye ekwentị anyị mgbe anyị na - eji 3D foto emekọrịta.
Ntọala mbupụ: Zoo
Ọnọdụ mbupụ mbugharị bụ otu n'ime ọnọdụ ndị ahụ kụrụ ma ọ bụ tụfuru. Mgbe ịchọtara onyonyo nke ji ọrụ nhọrọ mbupụ a rụọ ọrụ, ọ na-eyikarị ihe ịtụnanya. N’aka nke ozo, oburu na ihe onyonyo a adabaghi ​​nma, o na-adari ihu, gafee ihe ojoo.
Ọnọdụ mbupụ mbugharị
N’elu elu, inwere ike ihu na, maka otutu akụkụ, mbupu Zoom nke okooko osisi Lily ndị a dị oke mma. Ọ bụ ihe nwute, ị pụrụ ịhụ na AI nwetụrụ mgbagwoju anya na ala ekpe petal na etiti aka nri pink / peach ifuru.
Mbido mbupụ ya: slide
Ọnọdụ mbupụ slide bụ ọkacha mmasị ọzọ. O yiri 3D ọdịnala wigglegram, mana ka mma! Kama nke ahụ na-awụlikwa elu site na anya aka ekpe gaa n'isi aka nri, slide na-eji ọgụgụ isi anyị siri ike mepụta ngagharị dị mma n'etiti oke abụọ ndị a.
Kpachara anya mgbe ị na-ebupu ya na nhọrọ Ngosipụta ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ahịrị na foto 3D gị. Mgbe igwefoto si n'otu akụkụ gaa n'akụkụ ọzọ, ahịrị ahịrị dị ka azuokokoosisi dị n’elu nwere ike gbadata, nke na-eyi ntakịrị. Na oge a, ihe gbagọrọ agbagọ pere mpe na ọ bụghị nnukwu ego, mana ọ dị mma ịmara na agbanyeghị.
Mbido mbupụ: Square
Ọnọdụ mbupụ Square ahụ yiri ọnọdụ Orbit, belụsọ ọ na-agagharị n'akụkụ aka ekpe ma mepụta "nkuku dị nkọ" mgbe ị na-agagharị n'akụkụ ihe oyiyi ahụ. Ọnọdụ a na-enye gị ikike ilele ihe onyonyo n'akụkụ anọ niile.
Ọnọdụ mbupụ Obodo
3D Photo ND #MỌD # # 8: Tinye nzacha
Mgbe ụfọdụ mama Nature chọrọ ntakịrị enyemaka. Eleghị anya, ọkụ adịghị mma ma ọ bụ agba ndị dị na enyo ahụ emeghị ikpe ziri ezi. Site na LucidPix, ị nwere ike imeziwanye anya nke foto 3D gị na nzacha foto Instagram.
Tinye nzacha iji welie foto 3D gị
Lee, ị ga - ahụ na foto izizi ahụ dị mma ma gbanwee gaa na 3D nke ọma, mana agba dị iche iche nke igwefoto jisiri ike. N’ezie n’ụwa, ifuru ahụ juru eju ma maa mma. Iji dozie esemokwu a, anyị tinyere mgbakwunye na foto ahụ, mee ka ọ dị ka anyị mere foto 3D nke ifuru n'ụbọchị anwụ na-acha.
Ndụmọdụ # 9: Jiri Anya Echiche
Site na eji ele ihe anya, ị nwere ike ịkwalite foto 3D gị nke ọma. Chọta ma na-ese foto ụzọ ubi na-agbada n'otu oge na-egosi ọdịdị 3D nke LucidPix.
Ndị ọzọ foto siri ike foto ohere gụnyere n'okporo ámá foto na ike canyons. Oge ọzọ ị ga - ahụ ụzọ dị ogologo, kwụ ọtọ, pụọ na ekwentị gị were LucidPix jide ụwa maka ya!
Ndụmọdụ # 10: Emela otu Agba Agba
Ọtụtụ mgbe anyị na-ada azụ na-anwale na eziokwu. Anyị ma na ọ dị mma n'anya oge niile, ọ dịkwa mfe karịa ịnwale ihe ọhụụ. Oge ọzọ ị na - apụ na ịse foto, anyị na - atụ aro ka ị wepukwuo oge iji hụ etu ọ dị iji gbaa ọgbụgba ọkụ gị n'ụzọ ọhụụ nwere ike ịme ihe niile.
Were ọmụmaatụ nke tomato akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Site na ịbanye na ọkwa ha, yana nso iji mee ka ha jupụta ọtụtụ n'ime etiti ahụ, ị ​​nwere ike iwelie mmetụta 3D n'ezie.
Ndụmọdụ # 11: Tinye 3D Text Gị Photo
LucidPix na-eme karịa ime naanị foto 3D, ọ na-edezi ha. You nwere ike itinye ederede ọ bụla ịchọrọ na ihe okike 3D gị, ma hazie ya site na ịgbanwe ụdị font na agba ederede.
Site na obere omume na ntụnye foto 3D edepụtara n’elu, ị ga - eme foto 3D dị ịtụnanya na LucidPix n’egbughị oge! Echefukwala ịkọrọ gị ihe gị Obodo LucidPix. Anyị enweghị ike ichere ịhụ ihe ị mepụtara!
Dos na Don’ts of Reflective 3D Photography →← 5 Atụmatụ iji nọgide na-arụpụta ihe mgbe ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ